Panty & efe ara
Somụ nwoke Sock
Somụ nwanyị Sock
Ikpere High Sock
Ndị ọrụ Sock
Baby & Somụaka Sock
Ihe dị iche n'etiti sọks egwuregwu na sọks nkịtị
site ha na 20-09-14
Ihe m kọọrọ gị taa bụ ihe dị iche na sọks egwuregwu na sọks nkịtị. Mgbe Ubuy na-ekwu maka okwu nke taa, ekwerem na otutu mmadu ga enwe obi abuo. A na-ejikarị sọks na-eyi nke ọma, gịnị kpatara m ga-eji họrọ sọks egwuregwu mgbe m na-emega ahụ? Ha niile bu sọks? Kedu ihe dị iche? ...
Suggestionsfọdụ aro maka ụmụ nwoke ịhọrọ sọks ụmụ nwoke
site ha na 20-09-09
Fọdụ ndị na-ekwu na sọks bụ akpụkpọ anụ nke mmadụ. Cksgba sọks kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị bụ sayensị. Mostkpụrụ kachasị mkpa maka ụmụ nwoke iyi sọks bụ iji mesie egwuregwu ahụ dum ike. N'ọtụtụ oge, ogologo ọkpa ahụ ga-ekpuchi elu. Naanị n'amaghị ama ca ...
Mgbụsị akwụkwọ na-abịa！ Olee otú ịhọrọ elu-edu sọks
site ha na 20-08-17
Oge mgbụsị akwụkwọ na-eru nso, ọ bụ oge maka sọks. Kedu ka ụmụ nwanyị ndị hụrụ ịma mma n'anya si ahọrọ ụdị ahịa dị elu? Ubuy na-agwa gị na ọ dị mfe ịchịkwa ihe atọ ahụ ma họrọ otu sọks nke ejiji na akwa mma! 1. Lee ọdịdị dị mma nke sock The firs ...
Nyocha banyere ọnọdụ mmepe nke ahịa ụlọ ọrụ sọks nke China na 2020
site ha na 20-07-27
China abụrụla mba na-ebu sọks sọks na-ebupụ kwa afọ karịa ijeri iri na isii industrylọ ọrụ mmepụta sọks sitere Europe na America, dịka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Na mmụba nke ijikọ ụwa ọnụ nke akụ na ụba, ọnọdụ nke ọrụ mba ụwa na s ...
Etu ị ga-esi ahọrọ uwe ime egwuregwu？
site ha na 20-06-08
1. Họrọ akwa kwesịrị ekwesị A na-atụ aro akwa uwe egwuregwu dị mma, dị mfe ịsacha, na-eguzogide ọgwụ, yana ọsụsọ na-enweghị, a na-atụ aro eriri polyester na akwa naịlọn. Ha nwere ike iru ụkpụrụ ndị a dị n'elu ma mee ka ahụ ruo gị ala mgbe ị na-emega ahụ. 2. Họrọ ụdị dị ka iko dị na gene ...
Nụla banyere sọks nke obi ụtọ? N'afọ gara aga, ọ rere sọks maka 100 nde euro
site ha na 20-04-16
Ikekwe ụfọdụ ndị amachaghị Obi ụtọ Socks. E guzobere akara ahụ na Sweden na 2008, kpamkpam site na echiche sitere n'aka Mikael Söderlindh na Viktor Tell. Ha chọpụtara na ụfọdụ sọks na-egbuke egbuke ma na-ebipụta n'ahịa (ọtụtụ n'ime ha bụ isi Simpson ebipụtara) fọrọ nke nta ka ị ...
N'ozuzu n'ichepụta usoro maka sọks
site ha na 20-04-11
(I) Usoro nhazi zuru oke maka sọks: 1. Sock design-Raw material & color validation-Order raw materials- Sock sample-Crafts validation 2. Sock body production -under -machine nnyocha –seam-stitching-shaping ironing –packing (2) The usoro ịkpa akwa a kapịrị ọnụ nke ...
Onye anyị Ndi?
Na Ubuy ị ga-ahụ ọ bụghị naanị sọks na uwe na-enweghị ntụpọ ị na-achọ, kamakwa onye ọchụnta ego nwere mmekọrịta enyi, onye azụmahịa mba ụwa na-adị mfe. Anyị tụkwasịrị obi na ezigbo ọrụ na ebumnuche anyị bụ inwe mmekọrịta azụmahịa na-atụkwasị obi dabere na ọrụ dị mma na ogo dị elu.
Ebee ka chọta anyị?
Room617 ， A Block Tongrenjinghua NO.616 Gudun Road, Hangzhou Zhejiang China
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime awa 24.